२३:१०, ९ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन
२२:२८, ८ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
२३:१०, ९ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
'''विस्फोटक''' (explosives) केही [[यौगिक]] वा [[मिश्रण]] यस्ता हुन्छन् जसमा आगो लगाउनमा वा आघात गर्नमा ठूला पड़किनुकापडकिनुका साथ ती विस्फुटित हुन्छन्। पड़किनुकोपडकिनुको कारण ठूला अल्प कालमा धेरै ठूलो मात्रामा ग्यासेको बन्नु हो। यस्ता पदार्थहरुलाई "विस्फोटक" भन्दछन्। आज धेरै ठूलो मात्रामा विस्फोटकहरुको निर्माण हुन्छ।
(१) शांतिकालमा उनीसित चट्टानहरुलाई उड़ायाउडाया र कोइला र अन्य खनिजहरुलाई कम खर्चमा खानीहरुदेखि निकालिन्छ तथा
(२) युद्धकालमा विस्फोटकहरुदेखि शत्रुहरुलाई हानि पुगाएर आफ्नो रक्षा गरिन्छ।
विस्फोटक रासायनिक पदार्थको मिश्रण हुन्छ, जसलाई हथौड़ेदेखिहथौडेदेखि आघात गर्न वा ज्वालाले छूने, वा विद्युत् स्फुलिंगदेखि एकाएक ऊष्माका विकासका साथ धेरै ठूलो मात्रामा ग्यास बन्नका कारण विस्फोटन हुन्छ। यदि कुनै बंद कक्षमा विस्फोटन हो, त कक्षको देवलहरु छिन्न भिन्न हुन जान्छ।मा लाभकारी विस्फोटक अपेक्षया निष्क्रिय हुन्छन्, ताकि तिनको निर्माण र परिवहन निरापद हो सके। केही विस्फोटक यस्ता हुन्छन् कि पंखदेखि छूनमा पनि ती विस्फुटित हुन्छन्। यस्ता विस्फोटक कुनै उपयोगी कामका छैनते। उपयोगी विस्फोटकहरुमा केही उच्च विस्फोटक हुन्छन् र केही सामान्य वा मंद विस्फोटक। यो विभेद तिनको सुग्राहिताका आधारमा गरिंदैन, तर तिनको छिन्न भिन्न गर्ने क्षमतामा गरिन्छ। केही विस्फोटक, जस्तै मर्करी फल्मिनेट तथा लेड ऐजाइड (Lead azide), जो ठूला सुग्राही हुन्छन्, प्राथमिक विस्फोटकका रूपमा न्यून सुग्राही विस्फोटकका विस्फोटनमा उपयुक्त हुन्छन्। केही प्रमुख विस्फोटक यी हुन्:
विस्फोटकहरुको क्षमता दुई बातहरु, प्रस्फोटको तीव्रता र प्रस्फोटका संचारणका वेगमा निर्भर गर्दछ। यी दुइटै गुणहरुमा नैं छिन्न भिन्न गर्ने क्षमता आधारित हु्न्छ। तीव्रता ग्यासहरु र ऊष्माका उन्मुक्त भएमा निर्भर गर्दछ। यसका लागि विस्फोटकका एउटा ज्ञात भारको सीस निपिण्ड (block)को गुहामा राखेर, विस्फुटित गर्दछन्। यसदेखि सीस निपिण्डको गुहाको उत्तनन (distension) हुन जान्छ। गुहाका आयतनको माप विस्फोटकको प्रबलताको माप हो। एउटा अर्को विधिमा ५०० पौण्ड मर्टर (साना तोप)लाई लोलकका रूपमा लटका्दछन् र त्यो भन्दा ३६ पौण्डको गोला छोड़्दछन्।छोड्दछन्। यसदेखि मर्टरको प्रतिक्षप (recoil) हुन्छ। मर्टरको यही प्रतिक्षेप प्रबलताको माप हो। दुइटै विधिहरुदेखि प्राय: एकदेखि नैं परिणाम प्राप्त हुन्छन्। कठोर चट्टानहरुलाई उड़ानकाउडानका लागि प्रबल र उच्च वेगभएका विस्फोटकहरुको आवश्यकता पर्छ र कम कठोर चट्टानहरुका लागि कम प्रबल र मंद वेग भएका विस्फोटकहरुदेखि काम चल्छ। विस्फोटकका महत्वको एउटा गुण त्यसको सुग्राहि्दछ। सुग्राहिताको परीक्षण विस्फोटकमा भार गिराएर गरिन्छ। जति नैं अधिक उचाईदेखि गिरकर त्यो विस्फुटित हुन्छ, उति नैं कम सुग्राही त्यो हुन्छ। जो विस्फोटक कोइलाको खानीहरुमा व्यवहृत हुन्छन्, तिनको परीक्षण एउटा विशेष प्रकारदेखि हुन्छ, क्योकिं कोइलाको खानीहरुमा ज्वलनशील ग्यासहरु रहनसक्छन्। यस्तो ग्यासहरुमा जो विस्फोटक विस्फुटित छैनते, ती नैं खानीहरुमा प्रयुक्त हुन्छन्। यस्ता विस्फोटकहरुको ज्वाला साना र अल्पकालिक हुन्छ। ज्वालाको लंबाई र समयावधि फोटोग्राफीदेखि नापी जान्छ। बारूदको समयावधि ०.०७७ सेकण्ड र ज्वालाको लंबाई ११० मिमी. (१०० ग्राम का) तथा गनकटन (guncotton)को समयावधि ०.००१३ सेकण्ड र ज्वालाको लंबाई ९७ मिमी. हुन्छ। पिक्रिक अम्ल अमोनियम नाइट्रेटको समयावधि एवं ज्वाला लंबाई यसदेखि धेरै साना हुन्छ। गनकटनको तोपकक्षमा विस्फुटित गर्नको लागि प्रति वर्ग इंच लगभग ३ टनको दबाव उत्पन्न हुन्छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/434813" बाट अनुप्रेषित